Rev. Dr. Hkalam Samson Archives - Kachin News Group (KNG) ,
နောင်မွန်မြို့မှ ဖမ်းဆီးခံရသည့် ဆရာတော် ၃ ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ
မြစ်ကြီးနား KBZ ဘဏ်ရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဗီဒီရိုက်ကူးခဲ့သည့် လူငယ် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
Tag: Rev. Dr. Hkalam Samson
တပ်ချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံမှု နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် အမြတ်ဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း KBC ဥက္ကဌ ပြော
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့ မြစ်ကြီးနားတွင်တွေ့ဆုံမှုသည် ကချင်စစ်ရှောင်များ နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် အမြတ်ဖြစ်မည်ဟု သုံးသပ်မိကြောင်း Rev. Dr. Hkalam Samson က ပြောသည်။
KBC ခေါင်းဆောင် Rev. Dr. Hkalam Samson ရဲ့ KIO လိုင်ဇာမှမြစ်ကြီးနား အပြန်လမ်း စစ်ဆေးခံရ
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ခေါင်းဆောင် Rev. Dr. Hkalam Samson သည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO လိုင်ဇာမြို့မှ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ပြန်လာချိန် Nam San Yang ကျေးရွာတွင် တပ်မတော်မှ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်ထွက်ခွာလာနိုင်ပြီဟု သိရသည်။ ကချင်စစ်ရှောင်များနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးလုပ်ဆောင်နေသော KHCC အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Rev.Dr. Hkalam Samson သည် ယခင်က တပ်မတော်နှင့် အစိုးရကို အကြောင်းကြားမှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခေါက် မလုပ်နိုင်သဖြင့် စစ်ဆေးခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု…
Archives Select Month October 2021 (66) September 2021 (89) August 2021 (64) July 2021 (64) June 2021 (44) May 2021 (97) April 2021 (63) March 2021 (59) February 2021 (40) January 2021 (45) December 2020 (34) November 2020 (46) October 2020 (45) September 2020 (42) August 2020 (28) July 2020 (48) June 2020 (47) May 2020 (40) April 2020 (48) March 2020 (33) February 2020 (31) January 2020 (34) December 2019 (26) November 2019 (20) October 2019 (14) September 2019 (20) August 2019 (33) July 2019 (32) June 2019 (22) May 2019 (12) February 2019 (2) March 2018 (1) August 2016 (1) July 2016 (5) March 2015 (2) February 2015 (9) January 2015 (15)